Godaantonni Israa’eel keessaa baafaman gara Awurooppaatti imalaa jiru - Biyyoota Gamtoomanii(UN) - BBC News Afaan Oromoo
Godaantonni Israa’eel keessaa baafaman gara Awurooppaatti imalaa jiru - Biyyoota Gamtoomanii(UN)
Goodayyaa suuraa UNHCR kaffaltii Israa'el laattu fayyadamuun godaantonni tokko tokko karaa Afrikaa fi Meditiraaniyaanii gara kaabaatti deemaa akka jiran dubbateera
Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanitti Komishiniin olaanaa Baqattootaa (UNHCR) kaffaltii Israa'el laattu fayyadamuun godaantonni tokko tokko karaa Afrikaa fi Meditiraaniyaa gara Awuroppaattii imalaa akka jiran hime.
Godaantonni Israa'el keessaa ari'aman kun Awurooppaa gahuuf jecha lubbuu isaanii balaaf saaxilaa akka jiran, Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanitti Komishiniin olaanaa Baqattootaa (UNHCR) akkekkachiiseera.
Godaantoota lammii Ertiraa 80 dhaabbanni UNHCR Room keessatti haasofsiise keessaa irra caalaan isaanii Israa'eel keessaa akka bahanii maallaqni kennameefi akka tureef, isa booda immoo karaa Kaaba Afrikaan gara Awurooppa galuuf imala balaa guddaa qabu keessa akka darban amananiiru jechuun saaxileera.
Godantoota kanaaf maallaqa doolaara 3,500 kennaman - kunis fedhii isaaniitiin biyya isaaniitti akka deebi'an yookaan gara biyya sadaffaa(kaanitti) fudhachuuf waligalteetti deemuun akka of-dhaabaniif kennama.
Haa ta'u malee, hedduun isaanii gara jedhametti deemuu dhiisanii gara kaabaatti fuulleffachuun karaa Liibiyaan Miditeraaniyaa cehuun imalu.
Baay'een isaanii rakkoo guddaa, dararamnii fi saamichi karaa sana gubbaatti irra gaheera, jedha ibsi UNHCR kenne.
Israa'eel akka karoora isheetti koolu galtoota 30,000 ol ta'an humnaan biyya ishee keessaa baasuu yoo itti fufte, namoonni hedduun balaaf akka saaxilamuu malan UNHCR akeekkachiiseera. Baay'een koolu galtoota kanaa kan biyya Eritraa fi Sudaan irraa dhaqaniidha.
Torban darbe keessa Israa'eel koolu galtoota baatiin Caamsaa utuu hinxumuramin dura biyya ishee keessa hin bahin hafan akka hiitu beeksisuun ishee ni yaadatama.
Dhaabbani Baqattoota kunis Israa'eel ''baqattoota Ertiraa fi Sudaan gara Afrikaa gammoojjii Sahaaraa gadii qubachiisuuf imaammata qabdu akka dhaabdu,'' gaafatee ture.
Dubbii himaan UNHCR Wiiliyaam Ispiindileer Jeneevaa Siwiizeerlaand keessa gaazexeessitotatti akka himanitti, Karoorichi kan itti hinyaadaminii fi iftooma kan hinqabnedha jechuun wayita qeeqan, Israa'eel furmaata biraa akka barbaadduuf waamicha godhaniiru.